सरकारको सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा भर पर्ने अवस्था छैन | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता सरकारको सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा भर पर्ने अवस्था छैन
on: १० बैशाख २०७५, सोमबार ०८:०८ अन्तरवार्ता
सरकारको सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा भर पर्ने अवस्था छैन
देशको ऊर्जा सङ्कट समाधानमा सहयोगी बनाउने उद्देश्यले सरकारले सन् २००९ मा बोलपत्रमार्फत ६ ओटा आयोजना निर्माणको टुङ्गो लगायो । सोलु कोरिडोरअन्तर्गत सोलु (२३.५ मेवा) र तल्लो सोलु (८२ मेवा), कोशी कोरिडोरअन्तर्गत मेवा (५० मेवा) र माया (१४.९ मेवा)का साथै सिङ्गटी कोरिडोरअन्तर्गत सिङ्गटी (२५ मेवा) र खारे (२४.५ मेवा) जलविद्युत् आयोजना ‘सुपर सिक्स’का नाममा छनोट गरिए । दु्रत गतिमा आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणको योजनासहित समयमा काम नसक्ने आयोजनाका प्रवद्र्धक तथा प्रसारण लाइनको हकमा प्राधिकरण क्षतिपूर्तिको भागीदार हुने व्यवस्थासमेत गरियो । तर, लक्ष्यअनुसार प्रसारण लाइनको काम अघि नबढ्दा उक्त आयोजनाको अवस्थाबारे अपर सोलु जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशीसागर राजभण्डारीसँग आर्थिक अभियानका दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानीको सार :
सुपर सिक्सअन्तर्गत यहाँको सोलु जलविद्युत् आयोजनाको वर्तमान स्थिति के छ ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भएपछि वित्तीय व्यवस्थापनको काम सकिएर सन् २०१४ को अन्त्य तिरदेखि आयोजना निर्माणमा गएको छ । आगामी नोभेम्बरसम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छौं । तर, प्राधिकरणका तर्फबाट प्रसारण लाइनको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकाले सरकारलाई सहयोग गर्न सन् २०१९ को जुनतिर सक्नेगरी काम अघि बढाइरहेका छौं ।
सरकारलाई कस्तो सहयोग गरीरहनु भएको छ ?
हामी (सुपर सिक्स) आयोजनाका विकासकर्तासँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले सोलु कोरिडोरको प्रसारण लाइन सन् २०१९ को मार्चसम्ममा निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । उक्त समयभन्दा ढिलो गरेमा प्राधिकरणले सम्बन्धित आयोजनाको विद्युत् विक्रीबाट हुने कुल आम्दानीको ४५ प्रतिशत जरीवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, किन सरकारलाई आर्थिक भार पारिदिनु भनेर हामी आफ्नो तर्फबाट अलिकति समय बढाएरै भए पनि काम गर्दै छौं । धेरै समय लम्ब्याउँदा आफैलाई पनि नोक्सान हुने अवस्था आउँछ । समय लम्ब्याएर ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति तिरेर बसिरहन पनि हामी सक्दैनौं ।
उक्त कोरिडोरको प्रसारण लाइनको काम कुन अवस्थामा छ ?
हाम्रो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने सोलुखुम्बुको तिङ्लास्थित सबस्टेशन बनिरहेको छ । समस्या भनेको प्रसारण लाइनमा हो । तिङ्लादेखि सिरहाको मिर्चैयासम्म (९० किमी)को उक्त प्रसारण लाइन (१३२ केभी) चारओटा जिल्लामा पर्दछ । यसमध्ये सिरहाको जग्गा अधिग्रहण सकिएको छ भने उदयपुरको यही वैशाखभित्र सकिने क्रममा छ । बाँकी दुई ओटा जिल्ला (ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु)मा समस्या छ । यसले गर्दा कुल ३ सय २ ओटा टावर रहने सो प्रसारण लाइनमा हालसम्म ५२ ओटाको मात्र फाउण्डेशनको काम भइरहेको छ । यही गतिले काम हुने हो भने समयमा सकिने अवस्था छैन । त्यसैले, हामीले वैकल्पिक उपायबाट थोरै भए पनि विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छौं । त्यो व्यवस्था होला जस्तो देखिएको छ ।
वैकल्पिक उपाय भन्नाले ?
हामीले सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण समयमा नसकिने सम्भावना बढ्दै गएको देखेपछि अर्को विकल्प तयार गरिदिन करीब डेढ वर्षअघि नै प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका थियौं, जुन ओखलढुङ्गा–सल्लेरी (सोलु हाइड्रको विद्युत् गृह रहेको स्थान)सम्मको ३५ किलोमिटर प्रसारण लाइन (३३ केभी) हो । किनकि, जलजलेदेखि ओखलढुङ्गासम्मको ३३ केभी प्रसारण लाइन पहिले नै रहेको र त्यसलाई सुधार गरी ओखलुढुङ्गादेखि सल्लेरीसम्म ३३ केभी तान्नेबित्तिकै हाम्रो आयोजनाको १० मेगावाट (मेवा) मात्रै भए पनि विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा प्रवेश गराउन मिल्ने अवस्था छ । हाम्रो यो आग्रहअनुसार प्राधिकरणले काम गरिरहेको पनि छ । पोल गाड्ने काम करीब सकिएको छ । यो आर्थिक वर्षभित्र सकिन्छ होला । त्यसो भयो भने आयोजना बनाइसकेर पनि विद्युत् उत्पादन नै नगरी बस्नुभन्दा केही मात्रामा भए पनि उत्पादन गरी आयको बाटो खुल्ने आशा छ । यहीबीचमा ओखलढुङ्गामा अर्को आयोजना बनिसकेकाले हामीले उक्त प्रसारण लाइनको पूरा क्षमता उपभोग गर्न पनि नपाउने स्थिति छ ।
सम्झौता अवधिसम्ममा सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन नबने पनि क्षतिपूर्ति पाउने अवस्थामै हुनुहुन्छ नि, होइन ?
लिखित रूपमा त हो भन्नुप¥यो । तर, सरकारको आजसम्मका सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा भर पर्न सकिने अवस्था छैन ।
तपाईंले त प्राधिकरणमा ३ दशकभन्दा बढी समय काम गर्नुभयो । प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण के देख्नुभएको छ ?
प्राधिकरण एक्लैले काम गर्न त्यति सजिलो छैन । मन्त्रालय र प्राधिकरणको राम्रो सहकार्य हुनु जरुरी छ । मन्त्रालयमा आउने नेतृत्व (मन्त्री)ले विषय बुझ्ने, तदारुकता देखाउने र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसलाई स्पष्ट पार्न लोडशेडिङ व्यवस्थापनकै उदाहरण लिऊँ । पहिले घरायसी उपभोगको बिजुली काटेर भए पनि उद्योगलाई सोझै (डेडिकेटेड फिडरबाट) दिन प्राधिकरण नेतृत्वलाई मन्त्रीको दबाब हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा नागरिकले १८ घण्टासम्मको लोडशेडिङको मार खेप्नुप¥यो । तर, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ट्युनिङ मिलेकाले यो व्यवस्था उल्टियो र लोडशेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव भयो । यसका लागि मन्त्री आफै कहाँ पुग्नुपर्छ र के निर्देशन दिनुपर्छ जस्ता काममा सक्रिय रहे । लामो समयसम्म अल्झेर बसेको ढल्केवर–खिम्ती प्रसारण लाइन सम्पन्न हुनुमा पनि त्यो सहकार्यको ठूलो भूमिका छ ।
सोलु कोरिडोरका आयोजनाले प्रसारण लाइनको काम छिटो सम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई सघाइरहेको भन्ने सुनिन्छ । के कस्तो सहयोग गरिरहनुभएको छ ?
हो । नीतिगत रूपमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको निर्माण पूर्णतया प्राधिकरणकै दायित्व हो । तर, यसै भनेर बाटो हेरेर बसेर मात्रै पनि भएन । आज मात्र होइन, हामी तथा तल्लो सोलु आयोजनाले उक्त प्रसारण लाइनको काम शुरू हुनु अघिदेखि नै मिल्ने, सक्ने र हुनेसम्मको सहयोग गर्दै आएका छौं । जग्गा अधिग्रहणका सन्दर्भमा स्थानीयसँगको सहजीकरण, आवश्यक परेको ठाउँमा गइदिने, भनिदिने मान्छे नै खटाउने गरेका छौं ।
हरेक क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बन्ने तर प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन थालेको देखिन्छ । यो समस्याको समाधान कहिले होला ?
सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, स्थानीय तह/जनता र प्रवर्द्धक सबै बसेर जलविद्युत् आयोजना चाहिने कि नचाहिने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र समस्या आउँदैनन्, होइन भने सधैं यस्ता अप्ठ्यारा आइरहन्छन् । यो अभ्यास नगरेसम्म वातावरण सहज भएका ठाउँमा मात्रै प्रसारण लाइन बन्छन्, अन्यत्र बन्दैनन् ।